Nhau - Chii chaunofanira kuita kana vharuvhu ichidonha, uye chii chiri chikonzero chikuru?
Chii chekuita kana vharuvhu ichidonha, uye chii chiri chikonzero chikuru?
Kutanga, Chikamu chekuvhara chinodonha uye chinokonzeresa
1. Kushanda kwakashata kunoita kuti chikamu chekuvhara chinamatire kana kupfuura nzvimbo yepamusoro yakafa, uye kubatana kwakakuvara uye kuputswa;
2. Chikamu chekuvhara hachina kubatanidzwa, kusunungurwa uye kudonha;
3. Izvo zvinhu zvezvikamu zvekubatanidza zvakashata, izvo zvisingakwanise kumira kuora kweiyo yepakati uye yemagetsi abrasion.
1. Shanda nemazvo, usashandise simba rakawandisa kuvhara vharuvhu, uye vhura vharafu kuti isapfuure nzvimbo yepamusoro yakafa. Mushure mekunge vharafu yanyatso kuvhurwa, wiri remaoko rinofanira kuchinjiswa zvishoma;
2. Kubatana pakati pechikamu chekuvhara nevhavha yevhavha inofanira kunge yakasimba, uye iyo tambo yakasungirirwa inofanirwa kunge iine backstop;
3. Iyo yekutsanya inoshandiswa kubatanidza chikamu chekuvhara uye iyo vharuvhu hunde inofanirwa kumira kuora kweiyo yepakati, uye iine imwe nhanho yesimba remagetsi uye yekupfeka kuramba.
Chechipiri, Kunze kwekudonha pakurongedza
1.Kusarudzika kusarongeka kwekutakura, kusinga pesane nehutachiona hwepakati, kusingagadzirike kuvhavha yakanyanya kumanikidza kana vhuvhu, yakanyanya tembiricha kana yakaderera tembiricha application;
2.Kurongedza hakuna kuiswa nenzira kwayo, pane zvikanganiso zvakaita sekutsiva hombe nediki, yakaipa mweya wekubatana, kusimbisa uye kusunungura;
3.Kutakura kwakapfuura hupenyu hwebasa, kwachembera uye kurasa kusimba.
4. Iko revhavha yevhavha haina kukwirira mune chaiyo, uye iine hurema sekukombama, ngura, uye abrasion;
5. Huwandu hwekurongedza mhete haukwane uye gland harimanikidzwe zvine mutsindo;
6. Iyo gland, mabhaudhi, uye zvimwe zvikamu zvakakanganisika, zvichiita kuti gland risakwanise kumanikidzwa;
7. Kusashanda zvakanaka, simba rakawandisa, nezvimwe;
8. Iyo gland yakakwenenzverwa, uye mukaha uripakati pegland nevhavha yevhavha ishoma kwazvo kana kuti yakanyanya kukura, zvichikonzera dzinde revhavha kupfeka uye kurongedza kukuvara.
1. Izvo zvinhu uye mhando yekurongedza inofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nemamiriro ekushanda;
2. Isa kurongedza nenzira kwayo maererano nemirau yakakodzera;
3. Iko kurongedza uko kwave kushandiswa kwenguva yakareba, kuchembera, kana kukuvara kunofanirwa kuchinjwa munguva;
4. Kana bhegi revhavha rakakotama kana kusakara, rinofanirwa kutwasanudzwa nekugadziriswa. Kana yakakuvara zvakanyanya, inofanira kutsiviwa nenguva;
5. Iko kurongedza kunofanirwa kuiswa zvinoenderana nenhamba yakatarwa yemhete, iyo gland inofanira kusimbiswa zvakaenzana uye zvakaenzana, uye ruoko rwekumanikidza runofanira kuve neyakafanogaro-kusimbisa gaka rinopfuura 5mm;
6. Zvakuvadzwa zvinokuvadza, mabhaudhi uye zvimwe zvikamu zvinofanirwa kugadziriswa kana kutsiviwa nenguva;
Maitiro ekushanda anofanirwa kuteverwa, kunze kwekukanganisa mawoko, kushanda nekumhanyisa nguva uye nesimba rakajairika;
8. Gland bolts inofanira kusimbiswa zvakaenzana uye zvakaenzana. Kana mukaha uripakati peglandi uye hunde yevhavha iri diki kwazvo, mukaha unofanirwa kuwedzerwa nenzira kwayo; kana gwanza riri pakati peglandi uye hunde yevhavha iri rakanyanya kukura rinofanira kutsiviwa.
Chechitatu, The leakage pamusoro rakavhara pamusoro
1. Iyo yekuisa chisimbiso pamusoro haina kuenzana ivhu uye haigone kuumba yakasimba tambo;
2. Nzvimbo yepamusoro yekubatana pakati pevhavha yevhavha uye chikamu chekuvhara chakamiswa, chisina kunaka kana kusakara;
3. Iko revhavha rakakombama kana kusunganidzwa zvisirizvo, izvo zvinoita kuti chikamu chekuvhara chikombamiswe kana kusarongeka;
4. Kusarongeka kwemhando yeiyo yekuisa chisimbiso pamusoro pezvinhu kana kutadza kusarudza vharuvhu zvinoenderana nemamiriro ekushanda.
1. Sarudza nenzira kwayo zvinhu uye mhando yegasket maererano nemamiriro ekushanda;
2. Nyatsogadzirisa uye ushande zvakanaka;
3. Mabhaudhi anofanira kusimbiswa zvakaenzana uye zvakaenzana, uye chipanera che torque chinofanira kushandiswa pazvinenge zvichidikanwa. Iko kusimbisa-kusimba kwesimba kunofanirwa kusangana nezvinodiwa uye hakufanirwe kuve kwakanyanya kana kudiki. Panofanira kunge paine pre-kuomesa gaka pakati peiyo flange uye yakasungirirwa kubatana.
4. Gungano re gasket rinofanirwa kuenderana pakati, uye simba rinofanira kunge rakaenzana. Iyo gasket haibvumidzwe kudarika kana kushandisa ma gaskets maviri;
5. Iyo yekumira yekuisa chisimbiso pamusoro yakaora, yakanganisika, uye iyo yekugadzirisa mhando yakaipa. Kugadzirisa, kukuya, uye kuongorora kwemavara kunofanirwa kuitwa kuitira kuti static yekuisa chisimbiso pamusoro isangane nezvinodiwa zvinodiwa;
6. Teerera kuchenesa paunenge uchiisa iyo gasket. Iyo yekuisa chisimbiso pamusoro inofanira kucheneswa neparafini uye iyo gasket haifanire kuwira pasi.
Chechina, Kuvuza pamubatanidzwa weiyo yekuisa chisimbiso mhete
1. Mhete yekuisa chisimbiso haina kukoneredzwa zvakasimba;
2. Mhete yekuisa chisimbiso yakasungirirwa kumuviri, asi mhando yekuratidzira haina kunaka;
3. Iyo yekuisa chisimbiso mhete yekubatanidza tambo, sikuru uye kumanikidza mhete zvakasununguka;
4. Mhete yekuisa chisimbiso yakabatana uye yakaora.
1. Iyo inodonha munzvimbo yakavharika yekuumburuka inofanirwa kubayiwa jekiseni pamwe nekunamatira uyezve ndokuumbururwa nekugadziriswa;
2. Mhete yekuisa chisimbiso inofanirwa kugadziriswa zvinoenderana nesarudzo yemoto. Kana iyo yekumonera iri pamusoro isingakwanise kugadziriswa, iko kwekutanga kumisikidzwa nekugadziriswa kunofanirwa kubviswa;
3. Bvisa masikuru uye rin'i yekumanikidza kuchenesa uye kutsiva izvo zvakakanganisika zvikamu, gaya pekuisa chisimbiso pamusoro pechisimbiso uye chigaro chekubatanidza, uye kusanganazve. Kune zvikamu zvine hombe kukuvara kwetsvina, kuwelda, kubatana uye dzimwe nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa;
4. Kana iyo yekubatanidza pamusoro peiyo yekuisa chisimbiso mhete yakaora, inogona kugadziriswa nekukuya, kubatana uye dzimwe nzira. Kana isingakwanise kugadziriswa, rin'i yekuisa chisimbiso inofanirwa kutsiviwa.
Cheshanu. Kuvuza kwemuviri wevhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavha.
1. Hunhu hwesimbi castings hwakaipa, uye kune zvikanganiso zvakaita semablisters, yakasununguka dhizaini uye slag inosanganisirwa pane vharuvhu muviri uye vharuvhu chivharo.
2. Kutonhora kwemamiriro ekunze;
3. Welding isina kunaka, pane zvikanganiso zvakaita se slag inclusion, non-welding, stress cracks, etc .;
4. Ivhavha yesimbi yakakandwa mushure mekurohwa nechinhu chinorema.
1. Natsiridza kukanda mhando, uye ita simba rekuyedza muchinyatsoenderana nemirau usati waiswa;
2. Kune mavhavha pakushanda kwekushisa ari pazasi pe zero degree Celsius, anofanirwa kuchengetedzwa kana kusanganiswa nekupisa, uye mavhavha ari kunze kwebasa anofanira kudirwa mvura imire;
3. Musono wewelding yemuviri wevharuvhu uye bhoneti rinoumbwa newelding rinofanirwa kuitwa maererano nemitemo inowirirana yekushambadza. Uye iko kwekukanganisa kuona uye simba bvunzo kunofanira kuitwa mushure mekutenderera;
4. Zvinorambidzwa kusunda nekuisa zvinhu zvinorema pavhavha, uye hazvibvumidzwe kurova simbi yakakandwa uye zvisina-simbi mavharuvhu nesando yeruoko. Kuisirwa kwemahara-akakura mavharuvhu kunofanirwa kupedzwa nemabhureki.
Trunnion Bhora Valve, Gedhi reMvura Valve, Stainless Simbi Gate Valve, Stainless simbi Ball Valve, Sluice Gate Valve, Angle Globe Valve,